FJKM Ankadifotsy Ny soja sy ny vokatsoa entiny / Hainao ve / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Ny soja sy ny vokatsoa entiny08/04/2015 22:31
Efa imbetsaka angamba isika nahare fa betsaka ny vokatsoa entin'ny ny soja eo amin'ny fahasalamana noho ny fisian'ny singa “isoflavones” ao anatiny.
Ny soja sy ny vokatsoa entiny
Efa imbetsaka angamba isika nahare fa betsaka ny vokatsoa entin'ny ny soja eo amin'ny fahasalamana noho ny fisian'ny singa “isoflavones” ao anatiny. Ampahafantarina antsika ary fa tsara ny fihinanana azy ity iadiana amin'ny hatavezana be loatra, iadiana amin'ny aretin'ny taolana, tsara hoan'ny vehivavy mitsaha-potoana ihany koa. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa miaro amin'ny homamiadana ary manampy amin'ny fampidinana ny tahan'ny cholestérol ao amin'ny vatatsika izy.
Raha hiady amin'ny fiakaran'ny tahan'ny cholestérol dia tsara ny mihinana eo amin'ny 18 ka hatramin'ny 30g isan'andro eo farafahakeliny araka ny fikarohana nataon'ireo siantifika. Rehefa mihinana azy dia tsy voatery hoe misotro ronono soja iray vera lehibe ny maraina fa tsara kokoa ary mandaitra kokoa izy raha tsinjaraina mandritra ny tontolo andro ny fisotroana azy. Maro ny karazana sakafo vita amin'ny soja ka ao ny ronono, ny yaourt, ny fromazy sy ny desera isan-karazany azo hanoloana ny ronono ihany koa.
Raha araka ny fikarohan'ireo siantifika hatrany dia sakafo tena tsara atao naman'ny vehivavy ny soja satria dia miady amin'ny homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza ny fihinanana azy maharitra. Nisy tokoa mantsy ny andrana natao tamin'ny vehivavy mararin'ity aretina ity niisa 832 tany Shangai sy tamin'ny vehivavy salama niisa 846. Nandritra ny 5 taona no nihinan'ireo vehivavy ireo soja ka tamin'izay dia nisongadina tsara, fa tena nitondra vokatsoa hoan'ireo mararin'ny homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza ny fihinanana soja ary misoroka kosa hoan'ireo vehivavy mbola tsy marary. Hoan'ny vehivavy maherin'ny 50 taona ihany koa dia mahasoa ny fihinanana azy iadiana amin'ireo fiovan'ny vatana mandreraka sy manahirana rehefa mitsaha-potoana.
Tsara hoan'ny vehivavy mampihena vatana ihany koa ny soja satria ny singa ao anatiny dia mampihena ny fitiavana te hihina-kinana ka tsy mampatavy ny vehivavy.
Fantatra ihany koa mahasoa ireo olona manana fanaitainana miverimberina ny fihinanana soja. Raha nampitahain'ny siantifika mantsy ireo olona misotro ronon'omby sy ny misotro ronona soja dia hita mazava fa mahatanty fanaintainana kokoa ireo nahazo protéine avy amin'ny soja.
Farany tsara hoan'ny fo sy miady amin'ny fisian'ny diabeta ihany koa ny fihinanana soja, tsy adino fa manampy ireo olona voan'ny rari-tsaina koa ny soja. Araka ny fantatra ihany koa dia nohoity sakafo ity efa tafiditra ao amin'ny sakafon'ny japoney no mahaela velona ny mponina any an-toerana raha oharina amin'izao tontolo izao.
Manafatra anefa ireo manam-pahaizana rehetra fa tsy misy izany sakafo "miracle" izany fa ny fahaizana mandanjalanja sy manova izay hohanina no zava-dehibe sy ireo mitera-bokatsoa hoan'ny vatana. Mirary soa ho antsika hatrany.